အနုပညာ – Page 103 – Swel Sone News
ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူကိုယူသွားတယ် အကျင့်မကောင်းဘူးလို့ ပြောတဲ့သူတွေကို ချေပလိုက်တဲ့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း
အနုပညာလောကမှာ အသံသေးသေးလေး နဲ့ လူပုံကလဲ ပိုးဟပ်ဖြူလေးကို ဖွေးဥပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းဟာ ယခုချိန်မှာတော့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ သူမက သားလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မကြာခင်မှာလဲ သမီးလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ချစ်ရသူနဲ့အတူ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သာယာတဲ့မိသားစုဘဝကို တည်ဆောက်နေသူပါ။ ဒီလို နေထိုင်နေတာကို တစ်ချို့သောသူတွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကြဆဲဖြစ်တာကြောင့် သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းက ထိရောက်တဲ့ စကားလုံးနဲ့ ပြန်ချေပလိုက်ပါပြီ။ သူမပြောခဲ့တာကတော့ ”လူတွေကပြောကြတယ် သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းက ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူကိုယူသွားတယ် အကျင့်မကောင်းဘူးတဲ့ တစ်ကယ်က ကိုယ့်အပေါ်ရေရှည် သစ္စာရှိနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့သူကို ရွှေးခဲ့တာ ။ဘဝမှာအခုထိဆုတောင်းတိုင်း ပိုက်ဆံအများကြီး ရှိပါစေလို့ဆုမတောင်းဖူးဘူး။ စိတ်ချမ်းသာရပါစေပဲဆုတောင်းတာ။ လူတွေက အဓိကနဲ့သာမညကို နားမလည်ကြဘူး။ ပိုက်ဆံဆိုတာ ကံနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်တယ် ရှေးဘဝ ကုသိုလ် နဲ့ လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်တယ် ” ” ပိုက်ဆံတွေအရမ်းရှိပြီး စိတ်မချမ်းသာရတဲ့လူတွေကို အများကြီးမြင်ဖူးတယ်...
နန်းဆန်တဲ့အလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မမ​အေး​သောင်းက​တော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အား​ပေးမှု​ကြောင့်​ နှစ်​​တွေကြာမှ အနုပညာလောကထဲသို့ တစ်ကျော့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ မ​အေး​သောင်းက Westlife Concert ကိုအား​ပေးဖို့ ဘန်​​ကောက်​သို့ ​ရောက်​ရှိ​နေတာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ အဆိုပါပွဲမှာ​တော့ အဆို​တော်​ Rဇာနည်​နဲ့​တွေ့ပြီး မ​အေး​သောင်းတစ်​​ယောက်​ ​ဆေးထိုးခံလိုက်​ရတာ​ကြောင့်​ ပရိသတ်​​တွေလည်း စိတ်​ဝင်​တစား ဖြစ်​သွားကြတာပါ။ မ​အေး​သောင်းကို ဖက်​ထားသ​ယောင်​ရှိတဲ့ ​ကောင်​​လေးက ဘယ်​သူပါလိမ့်​​နော်​။ ချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ ဘန်​​ကောက်​မှာ ​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​နဲ့ အတူ​တွေ့ရတဲ့ မ​အေး​သောင်းကို ​ဆေးထိုးလိုက်​တဲ့ Rဇာနည်​ရဲ့အ​ကြောင်းကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။ Rဇာနည်​က​တော့ “Aye Thaung ငါတွေ့တယ်နော် ?? အာ့ ဘူလဲ??” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ​အေး​သောင်းနဲ့ ​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​ပုံကိုတင်​ပြီး ​ဆေးထိုးကြမ်းထားတာပါ။ အဆိုပါပိုစ့်​​အောက်​မှာ​တော့ မ​အေး​သောင်းက “အဲ့လိုမတင်သင့်ဘာ ???” ဆိုပြီး စိတ်​ဆိုး​နေသ​ယောင်​ စာ​လေးပြန်​​ရေးထားပါ​သေးတယ်​။ မ​အေး​သောင်းရဲ့​ဘေးက​ကောင်​​လေးက ဘယ်​သူပါလိမ့်​.. . မ​အေး​သောင်း​တော့ အရမ်းလန်း​နေတာပါ​နော်​။ ချစ်​ပရိသတ်​​တွေ​ရော...
ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်လဲဖြစ် ၊ ဒါရိုက်တာလဲဖြစ်တဲ့ ကိုပေါက်ဟာ အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေသလို လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလဲ မပျက်ခဲ့ပါဘူး ။ သူဟာ လက်တစ်လောမှာတော့စစ်ကားတစ်ကားရိုက်ကူးဖို့ လုပ်ဆောင်နေပြီး တနေ့က နေပြည်တော်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ သူကနေပြည်တော်ကို ရောက်တုန်း နာမည်ကြီးနေတဲ့ မူကြိုကျောင်း လေးဆီကို ရောက်ခဲ့ကာ အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ သူက ကျောင်းလေးနဲ့ အမှတ်တရဆိုတဲ့ပုံလေးကို “ နေပြည်တော်ရောက်တုန်း နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့အမှတ်တရ။ ဒီကိစ္စအတွက် အထောက်တော်ပေါက်ကြီး ရောက်လာပြီ။ သွေးအေးသွားကြပြီလား? No No No” လို့ဆိုကာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုအားလုံး စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနုပညာရှင်တွေရော ၊ ဆရ ၀န်တွေ၊ ရှေ့နေတွေနဲ့ ကလေးမေမေတွေပါ မကျန်ပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာ လေးလခန့်ကြာမြင်နေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် တရားခံအစစ်အမှန်ဆိုတာကို ယနေ့ချိန်ထိ မသိရသေးပါ။ ယနေ့မှာလဲ သက်ဆိုင်ရာက တရားခံပါလို့...
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချော ပိုးအိအိခန့်နဲ့ ဘောလုံးအားကစားသမား အောင်သူတို့ကတော့ တူနှစ်ကိုယ်မေတ္တာမျှပြီး နှစ်ယောက်တစ်ဘဝလေးကို တည်ဆောင်လိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပိုးအိအိခန့်နဲ့ အောင်သူတို့ ဇနီးမောင်နှံကို ပရိသတ်တွေကလည်း ချစ်ခင်အားပေးကြပြီး သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ချစ်ခရီးလမ်းလေးကို အားကျနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးအိအိခန့်နဲ့ အောင်သူတို့ ဇနီးမောင်နှံက ဇူလိုင်၁၉ရက်နေ့ အာဇာနည်နေ့မှာပဲ သားဦးလေးကို မွေးဖွားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးအိအိခန့်ကတော့ ခင်ပွန်းနဲ့တူတဲ့ ချစ်စရာသားလေးတစ်ယောက်ကို မွေးဖွားပေးလိုက်လို့ အရမ်းပျော်ရွှင်နေရပြီး အခုဆိုရင်တော့ မိသားစုသုံးယောက်စိုစိုပြေပြေဖြစ်သွားပါပြီနော်။အောင်သူကလည်း သားလေးကို လက်ကမချဘဲ တစ်ချိန်လုံးမျက်နှာလေးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ကာ အရမ်းချစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ သားဦးလေးကလည်း ဖေဖေအောင်သူရဲ့ မျက်နှာပေါက်လေးအတိုင်း အရမ်းချစ်စရာကောင်းပြီး ချစ်မွှေးပါတဲ့ ကလေးလေးပါနော်။အခုဆိုရင်တော့ ဖေဖေ အောင်သူက သားလေးအိပ်နေတဲ့ ချစ်စရာပုံလေးကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေလောတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးအိအိခန့်နဲ့ အောင်သူတို့ရဲ့ မိသားစုဘဝလေးကတော့ သာယာစိုပြေပြီး အရမ်းကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ်နော်။ Source:Aung Thu
မွေးနေ့မှာ တရားစခန်းဝင်နေတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့်
သက်မွန်မြင့်ဟာ အခုဆိုရင်တော့ အသက် ၃၇ နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘဝလေး တည်ဆောက်ထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့်ဟာ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့က အသက် ၃၇ နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ မွေးနေ့မှာတော့ မှော်ဘီမြို့မှာရှိတဲ့ အောင်ဇဗ္ဗူတောရတရားရိပ်သာမှာ တရားစခန်း ဝင်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ မွေးနေ့မတိုင်ခင်တုန်းက သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ အတူ မွေးနေ့ပါတီ ကျင်းပခဲ့သေးတယ်လို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုစစ်နိုင်က ပြောပါတယ်။ ‘’မွေးနေ့မှာ တရားစခန်းဝင်နေလို့ wish လုပ်သူတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်စကားတွေပြန်မပြောနိုင်တဲ့ ချစ်သက်ကိုယ်စား မွေးနေ့အကြို မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ခဲ့ရတဲ့ Birthday dinner party လေးကို မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ Fan တွေအားလုံးကို အပျော်တွေမျှဝေတဲ့အနေနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံး ထပ်တူထပ်မျှပျော်ရွှင် ကြည်နူးကြပါစေ’’ ဆိုပြီးတော့ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့...
ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေ ရဲ့ ချစ်လှစွာသော ခင်ပွန်း မင်းသားကြီးဦးသန်းထွဋ် ပန်းလှိုင်ဆေးရုံတွင်ကွယ်လွန်
တစ်ချိန်က ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးခြင်းများစွာ ရရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေ ဟာ ဆိုရင် ခုအချိန်ထိ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး တစ်ချို့မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် နေတုန်း ဖြစ်သလို ခုအချိန် ထိ လှနေတုန်းပါ။ ဒီတစ်ခါမှတော့ ဝမ်းနည်းစရာ သတင်းလေး တစ်ခုကို ပရိသတ်တွေကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာ သတင်းကတော့ ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေရဲ့ ချစ်လှစွာသော ခင်ပွန်း တစ်ချိ်န်က မင်းသားကြီးတစ်ဦးအဖြစ် နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဦးသန်းထွဋ် ဟာ ဆိုရင် ဒီနေ့ မှာပဲ ပန်းလှိုင်ဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ် ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနုပညာရှင် လောကသားများနဲ့ ပရိသတ်တွေက မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပါ။ ဒေါ် ဝါဝါဝင်းရွှေ ရဲ့ ချစ်လှစွာသော ခင်ပွန်း မင်းသားကြီးဦးသန်းထွဋ် ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် လည်း မိသားစုနဲ့...
နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်ပေါင်း 200 ကျော်ဖြင့်တင်ဆက်ပြသမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံးသော aroma Wedding Center ၏ ၈ ကြိမ်မြောက် Fashion Show ပွဲကြီး နှင့် Wedding Service Promotion ပွဲကြီး ပြုလုပ်မည့်အကြောင်း Media Release ပွဲကို ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် ညနေ ၃ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ Gandamar Grand Ballroom မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ aroma Fashion Show 2020 ပွဲကြီးအတွက် ပြုလုပ်တဲ့ စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲကို ဒေါက်တာ မြဝတ်ရည်လဲတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ မြဝတ်ရည်ကတော့ အခုနောက်ပိုင်းပွဲတော်တော်များများမှာတွေ့လာရတဲ့ ဆယ်လီတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒေါက်တာ မြဝတ်ရည်ရဲ့ ပွဲတက်ဖက်ရှင် ပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးကလဲ သလောကျရင် Share ပေးကြပါဦးနော်။ Photo...
မင်္ဂလာဆောင်ကျ ဖိတ်ဦးလို့ ပြောသွားခဲ့တဲ့ ကိုအောင်ဇော်အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာပြောလာတဲ့ ချစ်စနိုးဦး
ပြီးခဲ့တဲ့ ဂျူလိုင်လ (၂၁) ရက်နေ့က မိသားစုတွေ၊ ပရိသတ်တွေကို ခွဲခွာပြီး ဘဝတစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ကိုအောင်ဇော်ရဲ့အကြောင်းကတော့ ချစ်ခင်ရသူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ လေပြင်းတွေ တိုက်ခတ်သွားသလို ခံစားခဲ့ကြရတာပါ။ အနုပညာရှင် မောင်နှမတွေကလည်း မိသားစုနဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေကြပြီး စိတ်ထားကောင်းသူကြီး ကိုအောင်ဇော်ရဲ့အကြောင်းကို စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြလာကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ ချစ်စနိုးဦးက သူမ မင်္ဂလာဆောင်ကျရင် ဖိတ်ဦးလို့ ပြောခဲ့တဲ့ ကိုအောင်ဇော်ရဲ့သတင်းကို ကြားကြားချင်း အရမ်းစိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်း ထုတ်ပြောလာတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ပိုလို့ ဝမ်းနည်းနေကြတာပါနော်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ခရီးလွန်နေလို့ ခင်မင်ရတဲ့ ကိုအောင်ဇော်ရဲ့အကြောင်း နောက်ကျမှ ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ချစ်စနိုးဦးရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ချစ်စနိုးဦးကတော့ “မင်္ဂဆောင်ကျ ငါ့ကိုဖိတ်ဦးနော်တဲ့ ပြောသွားတဲ့ငါ့အကို ဒီနေ့မှခရီးကပြန်ရောက်တော့ အမေကပြောတယ်အကိုဆုံးသွားပြီဆိုတော့ အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အကိုရေ … ကားတွေအများကြီးတူတူရိုက်ခဲ့ပြီးစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ငါ့အကို ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ ….????” ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပါ။...
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မော်ဒယ် အလှမယ်လေးတစ်ဦးဖြစ်သူ ချောမောလှပတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ လှပတဲ့ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ် နန်းအမရာ ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။သူမရဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှဟာဆွဲဆောင်အပြည့်ရှိပြီး ယောင်္ကျားလေး ပရိတ်သတ်အများဆုံး အားပေးမှုကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။သူမရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှပုံရိပ်တွေကို အများဆုံး ရိုက်ကူးလေ့ရှိတာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေကြား နာမည်ကျော်ကြားတာတွေ့ရပါတယ်။ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံးတင်လေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။သူမဟာ လတ်တလောမှာလည်း သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှတရားတွေပေါ်လွင်အောင် sexy ကျကျ ရိုက်ထားတဲ့အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေးကို တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။နန်းကတော့ အမြဲကို မရိုးနိုင်တဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ညို့ယူထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမြဲလို ဖက်ရှင်အလန်းတွေနဲ့ရိုက်ချက်တွေကလည်း ပုရိသတွေကို ကြွေစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင်ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာဖြစ်ပြီး လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာပေါ်တွင်လည်း ရေပန်းစားနေတဲ့ Sexy ကျကျ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေနဲ့ အမိုက်စားကထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် မကြာခဏဖော်ပြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ချစ်ပရိတ်သတ်တွေတွက် နန်းအမရာရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို...
သား​လေးကို ခွန်​ဘုန်းသုဒ္ဓ လို့ နာမည်​​ပေးလိုက်​တဲ့ မေမေ နန်းမြတ်​ဖြိုးသင်း
ကိုတာတာမျိုးနဲ့ သရုပ်​​ဆောင် နန်းမြတ်​ဖြိုးသင်း တို့ရဲ့ သားလေး JackJack က ရက်၁၀ဝပြည့်သွားပါပြီ။ သား​လေးကို “ခွန်ဘုန်းသုဒ္ဓ”လို့ နာမည်​​ပေးထားပါတယ်​။ ဒီနာမည်​​လေး​ပေးဖြစ်​ပုံကို​တော့ နန်းမြတ်​ဖြိုးသင်းက အခုလို ရှင်းပြထားပါတယ်​။ ခွန် ဆိုတာပအိုဝ်းလို မောင် လို့ဆိုလိုတာပါ ဘုန်း ဆိုတာတော့ဘုန်းကံ သုဒ္ဓ ဆိုတာကတော့ဖြူစင်သောသန့်ရှင်းသောဆိုတဲ့အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖေဖေနဲ့ရုပ်ချင်းချွတ်စွတ် မေမေနဲ့မျိုးရိုးနာမည်တူ ဖေဖေမေမေတို့ရဲ့သားဦးရတနာလေး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Photo- nan myat’s fb